Thit Htoo Lwin: 5/8/11 - 5/15/11
G-Mail/G-Talk, Y-Mail/Y-Talk နှင့် Mtalk များကိုအသုံးပြုလျှင် အထူးသတိပြုစေလို
G Mail G Talk & Y Mail Y Talk Article
5/16/2011 06:20:00 PM
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Sunday, 15 May 2011 21:47 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (Citizen of Burma Award)www.citizenofburma.org နေ့စွဲ - ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက် ပြည်တွင်းရှိ လူမှုလုပ်ငန်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်သူများမှ နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၅ ဦးအနက် ဆန္ဒမဲအများဆုံး ရရှိသူတဦးကို ရွေးချယ်ကြသည့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြု အစီအစဉ်ကို မေလ၁၅ရက် က ကျင်းပပြီး ဒေါ်ရှု ကို ဆန္ဒမဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်လိုက်သည်။
5/16/2011 09:28:00 AM
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုများနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်း နားထောင်ရန် အသံဖိုင် နှင့်ဓါတ်ပုံများ
(အသံဖိုင်နှင့်ဓါတ်ပုံ)မောင်မောင်ကျော်စိုးဟိန်း နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ ဓါတ်ပုံများ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုများနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်း နားထောင်ရန် အသံဖိုင် သစ်ထူးလွင်
5/16/2011 06:07:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၆-မေ-၂၀၁၁)
ရွှေလီမြစ် ကူးတို့ဆိပ် မှာ စစ်အရာရှိငွေတောင်း(နှိပ်ရန်)
ပြည်သူစစ်အင်းအားနှင့် ၀မ်းဟိုင် ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖွယ်ရှိ(နှိပ်ရန်)
သတင်းမှန်ရေးနဲ့ ဘက်မလိုက်ဖို့ ဒေါ်စု တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
မြန်မာသမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းခွင့် နိုင်ငံတကာဖိအား တိုးဖွယ်ရှိ(နှိပ်ရန်)
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ တိုးလာသော်လည်း လူနည်းစုအတွက်သာဖြစ်နေ(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ်က လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ဖြင့် ထောင်ဒဏ်တနှစ်လျှော့ပေး(နှိပ်ရန်)
အီးယူ မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းက ခါးသီးစရာ သင်ခန်းစာတွေ အီးယူ မလေ့လာသေး(နှိပ်ရန်)
ဗြဟ္မစိုရ်တရား လက်ကိုင်ထား၍ လူသားတိုင်းကို ကူညီသည် (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးပါတီထုတ် သတင်းစာစောင်များ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြန်ရန် အမိန့်ထုတ်(နှိပ်ရန်)
သမ္မတသစ် တရုတ်ပြည်သို့ ပထမဆုံး ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားမည် (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးလက်မှတ် သမ္မထံ ပို့(နှိပ်ရန်)
ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဟောင်း မောင်ဦး ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးကို လက်တန်း အလုပ်မှဖြုတ်(နှိပ်ရန်)
မင်္ဂလာဆောင်သွားမည့်လှေ တိမ်းမှောက်၊ လူ ၅ ဦးသေဆုံး (နှိပ်ရန်)
အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူများသာ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်ထား (နှိပ်ရန်)
မစ္စတာကင်တားနား မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် တွေ့မည် (နှိပ်ရန်)
ကားတိုက်ခံရ၍ ဆေးရုံတင်ရသူ အမျိုးသမီးကို တရုတ်ကုမ္ပဏီက ငွေ ၂၀၀၀ သာ လျော်ကြေးပေး(နှိပ်ရန်)
အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် ယူအက်စ်ဘီ ဖြင့်သုံးစွဲခွင့်မရှိ(နှိပ်ရန်)
ဂျပန်မှာ သင်္ကြန်ပွဲဆင်နွဲရင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးလက်မှတ်ထိုး(နှိပ်ရန်)
သြစတေးလျ တွင် မြန်မာ့အရေးညီလာခံကျင်းပ(နှိပ်ရန်)
နာရေးကူညီမှုအသင်း ဒီဗွီဒီ လည်း ဆင်ဆာတင်ရမည်(နှိပ်ရန်)
မုန်တိုင်းသင့် ဖျာပုံ ရေလုပ်သားများ ရပ်တည်ရေးခက်ခဲ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ DKBA တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ၊ မြောက်ကိုရီးယား ပူးပေါင်းမှု စောင့်ကြည့်ရေး ကုလ သတိပေး(နှိပ်ရန်)
5/16/2011 04:44:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (16 မေ 2011)
ဆော်ဒီသံတမန် ပါကစ္စတန်မှာ အသတ်ခံရ(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုတရားရုံး ဂဒါဖီကို အလိုရှိ(နှိပ်ရန်)
ICC နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးက ကဒါဖီကိုစွဲချက်တင်(နှိပ်ရန်)
IMF ဦးဆောင်ညွှန်မှူး ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း ဗလက္ကာရပြုမှုနဲ့ တရားစွဲခံရ(နှိပ်ရန်)
5/16/2011 04:26:00 AM
Myanmar News Now: 16 May 2011
Thai FM says Burma unfit for ASEAN chair(Click)
Thailand Proposes New Border Routes With Myanmar
Flawed math behind Myanmar 'democracy' (Click)
Amnesty ‘likely’ for Myanmar prisoners(Click)
Letters to the International Herald Tribune: Back to Reality With Myanmar? (Click)
Myanmar: UN meets with leading government and opposition figures(Click)
Australia and Thailand Pressure Burma on Rights Record (Click)
Burma's Leadership Change to Nowhere (Click)
5/16/2011 04:17:00 AM
By David Gollust's Report in Burmese သောကြာ, 13 မေ 2011 အမေရိကန်နိုင်ငံဆီကို အရောက်လာခွင့် ဗီဇာမဲဖောက်ရာမှာ ကွန်ပျူတာရဲ့ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာကို မဲပေါက်တယ်ဆိုပြီး မှားယွင်းစွာ အသိပေးခဲ့မိတဲ့အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက အခု တောင်းပန်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပေါင်း ၁၅ သန်းနီးပါးရဲ့ လျှောက်လွှာတွေကို ပြန်ပြီး စိစစ် ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ဒေးဗစ် ဂေါလပ်စ် (David Gollust) နိုင်ငံခြားရေးရုံးက သတင်း ပေးပို့ထားတာကို ဦးကျော်ဇံသာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ DV Lottery လို့ အများခေါ်နေကြတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ လာရောက် သစ်ထူးလွင်
5/15/2011 09:28:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၅-မေ-၂၀၁၁)
ဦးသိန်းစိန်ကို လက်မှတ်ထိုး ပန်ကြားလွှာ ပေးပို့(နှိပ်ရန်)
ပီနန်းမြို့ ရွှေစေတီကျောင်း ဖွင့်ပွဲ(နှိပ်ရန်)
မုဒုံမြို့အနီး တယ်လီဖုန်းရုံး ပစ်ခတ်ခံရ(နှိပ်ရန်)
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (15 မေ 2011)
တာလီဘန် ကူညီသူ ၆ ဦး အမေရိကန် စွဲချက်တင်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်ကိုဖမ်းဖို့ အမေရိကန် စီးနင်းမှု ပါကစ္စတန်လွှတ်တော် ရှုတ်ချ(နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယ အာဏာရ ညွန့်ပေါင်း ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲများမှာ အားကောင်း(နှိပ်ရန်)
အသေခံဗုံးခွဲမှုကြောင့်လူ ၈၀ ကျော်သေ(နှိပ်ရန်)
မောင်သော်က ပြောတဲ့ ပုံပြင်များ(၂) May 14 2011 စာရေးဆရာ အယ်ဒီတာ မောင်သော်က
တနေ့လို့ပဲပြောကြပါစို့၊ ကျနော်ဟာ ဆရာမောင်သော်က အိမ်ရှေ့က စာရေးကရိယာအရောင်းဆိုင်မှာ ရေးခြစ်စရာတချို့ ဝယ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဆရာဟာ သူ့အိမ်ရှေ့မှာ ထိုင်နေတာ တွေ့တာကြောင့် နုတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ်၊ ဆရာက ကျနော့်ကို သစ်ထူးလွင်
5/15/2011 07:19:00 AM
Myanmar News Now: 15 May 2011
Military leader concludes visit to Myanmar(Click)
Chinese military leader concludes visit to Myanmar(Click)
'Political situation in Burma needs to improve'(Click)
5/15/2011 12:32:00 AM
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီ အဖွဲ့​ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်း​လူငယ်​ဖော်​ဆောင်​ရေး​မှ ဦး​ဆောင်၍ ရန်ကုန်တိုင်း​၂၃ မြို့​နယ်မှ လူငယ်များ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲကို အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီ အဖွဲ့​ချုပ်ရုံး​၌ ၂၀၁၁ခုနှစ် မေလ (၁၃) ရက်၊​ယ​နေ့​နေ့​လည် ၁၂ နာရီတွင် ကျင်း​ပ ပြုလုပ် ခဲ့​သည်။ဆွေး​နွေး​ပွဲသို့​လူငယ် ၆၀ ကျော် တက်​ရောက်ခဲ့​ကြပီး​သက်ဆိုင်ရာ မြို့​နယ်များ​၏ နိုင်ငံ​ရေး​အ​ခြေအ​နေများ​လူမှု​ရေး​လုပ်ငနေ်းဆာင်ရွက်မှုများ​အား​ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြ​ကြောင်း​သတင်း​ရရှိသည်။
5/14/2011 06:14:00 PM
၀၆၀၅၁၁ (ထက်အောင်ကျော်)စီမံကိန်းအစ အမိုက အခုတလော သတင်းတွေမှာနေရာယူလာနေတဲ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းအစဟာ ၁၉၉၇- မင်းသမီးစခန်း ထိုးစစ်မတိုင်မှီကတည်းကပါ။ အဲဒီကာလက ကျနော်ဟာ ABSDF- တောင် ပိုင်းဒေသ မင်းသမီးစခန်း ပြန်ကြားရေးဌာနမှာ တာဝန်ယူနေရပီး တဖက်ကလဲ နယ်စပ်က ထူးခြား သတင်းတွေကို နော်ဝေး-အခြေစိုက် ဒီဗွီဘီ-သတင်းဌာနဆီ စာတိုက်ကတဆင့် သစ်ထူးလွင်
ခုတလော ငယ်စဉ်ကျောင်းနေဘက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့၊ သန်းဝေ ဆိုသူ ခဏခဏသတိယနေမိတယ်။ မူလကတော့ သူ့နာမယ် သန်းဝေပေါ့ နောက်တော့ဂျိုကာ သန်းဝေဖြစ်သွားရတယ်။ ဖြစ်သွားရ ပုံက ဒီလိုပါ…
ကျနော်တို့ငယ်စဉ်က ဒီဇင်ဘာကျောင်းသားအားကစားပွဲတော်အတွက် ဆောင်းဦးပေါက်တွင် ပြည်နယ်တွင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိ ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျောင်းအသင်းရဲ့ ဘောလုံးပွဲတိုင်း၊ ကျနော်တို့မြို့နယ်အသင်းနဲ့ ကန်တဲ့ ဘောလုံးပွဲတိုင်းမှာ၊ သန်းဝေဟာ အ တက်ကြွဆုံး ဘောလုံးပွဲပရိဿ သစ်ထူးလွင်
5/14/2011 12:10:00 PM
Myanmar News Now: 14 May 2011
Top UN envoy says he receives encouraging signals from Myanmar govt(Click)
Myanmar: UN Envoy Meets Government And Opposition Figures(Click)
Myanmar signs ‘encouraging’(Click)
Myanmar: UN envoy meets with leading Government and opposition figures(Click)
Myanmar parliament speaker meets Chinese military leader(Click)
Myanmar eyes 'fraternal' ties with China(Click)
Myanmar president meets Chinese military leader(Click)
Myanmar president meets Chinese military leader on friendship, cooperation(Click)
Chinese, Myanmar military leaders hold talks in Nay Pyi Taw(Click)
Myanmar signs encouraging: UN envoy (Click)
5/14/2011 12:04:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၄-မေ-၂၀၁၁)
မြန်မာကို နော်ဝေ နိုင်ငံသားတွေ သွားဖို့ တိုက်တွန်းမယ်(နှိပ်ရန်)
CDMA ဖုံး အရောင်းရပ်မဲ့ ကောလဟာလ တွေထွက်(နှိပ်ရန်)
ကုလ အရာရှိ ခရီးစဉ် ပြီးဆုံး(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သံဃာရဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုး(နှိပ်ရန်)
ကတိအတိုင်း အချိန်မဆိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ် တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
အပြောင်းအလဲဟာ ပြည်တွင်းမှာ မူတည်ဟု ကုလကိုယ်စားလှယ် ပြော(နှိပ်ရန်)
ပဲခူး ဗုံးကွဲမှု စတင် စစ်ဆေး၊ တရားခံရှေ့နေ လျှောက်ထားချက်များ ပယ်ချခံရ(နှိပ်ရန်)
စစ်မှန်သည့် အပြောင်းအလဲပေါ်ပေါက်ရေး ကုလကိုယ်စားလှယ်နှင့် NLD ဆွေးနွေး(နှိပ်ရန်)
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဆွေးနွေးမှုအပေါ် ဦးဉာဏ်ဝင်းပြောကြား(နှိပ်ရန်)
The Lady ရုပ်ရှင်ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဘဝကို လူပိုသိလာစေမည်(နှိပ်ရန်)
၂၀၁၀ သတင်းကောင်းများမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်မှုပါဝ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရက်သေစာ တွင်ကျယ်လာ(နှိပ်ရန်)
နယ်ခရီးစဉ် မကြာခင်စတင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်များ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံပို့(နှိပ်ရန်)
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများ အဖွဲ့တွေ့ဆုံ(နှိပ်ရန်)
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက် တရုတ်သံပိုက်လုံးကြီးများ စတင်သယ်ပို့(နှိပ်ရန်)
မြန်မာအစိုးရကို ကျေနပ်စရာ ရှိ်ကြောင်း ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ်လက်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဂျာနယ်တစောင် ယာယီအပိတ်ခံရ (နှိပ်ရန်)
ဂီရိ ဒေသ ကျေးရွာ တချို့ ကချင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ (နှိပ်ရန်)
မလေးရှား-သြစတြေးလျ ဒုက္ခသည်သဘောတူညီချက် ဝေဖန်ခံရ (နှိပ်ရန်)
မစ္စတာ နမ်ဘီယာ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (နှိပ်ရန်)
အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ကို အန်အယ်လ်ဒီ ပိုမျှော်လင့် (နှိပ်ရန်)
ရေနံပိုက်လိုင်းအတွက်မိုင်းခွဲမှု ရေလုပ်သားများထိခိုက်ဟု ရခိုင်ပါတီပြော (နှိပ်ရန်)
ကမ္ဘာ့ဖလား အာရှဇုန် ပထမအဆင့် ခြေစစ်ပွဲဝင်ရန် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်း ဖွဲ့စည်း(နှိပ်ရန်)
ကာလကတ္တားထောင် အကျဉ်းထောင်ထဲမှ ရခိုင်- ကရင် ၃၄ ဦး လွှတ်မြောက်ရေး သေချာ ရေရာခြင်း မရှိဘဲ ဖြစ်နေ(နှိပ်ရန်)
စစ်တပ်က ဖမ်းမိဆိုင်ကယ် ပြန်ရောင်း (နှိ်ပ်ရန်)
မူစယ်လောင်းကစားဝိုင်း မဖမ်းမိ (နှိပ်ရန်)
တန့်ယန်းမြို့နယ် ကျေးလက်လူထု မြန်မာတပ်စခန်းအတွက် နေ့စဉ်ရေခပ်ပေးနေရ(နှိပ်ရန်)
ဒုသမ္မတ သာသနာရေးကိစ္စ ကူညီဖြေရှင်းပေး (နှိပ်ရန်)
တောင်ပိုင်း သျှမ်းတပ် နှင့် မြောက်ပိုင်း ပူးပေါင်းမည်ကို မြန်မာစစ်တပ်စိုးရိမ် (နှိပ်ရန်)
ဝ တပ်ဖွဲ့ကားအား မြန်မာစစ်တပ်ပစ်ခတ် ဝ စစ်သား တယောက်သေ(နှိပ်ရန်)
5/14/2011 11:43:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (14 မေ 2011)
နိမ်ိတ်ပြနေတဲ့ အကျည်းတန် အကြမ်းဖက် ရွေးကောက်ပွဲအကြို တိုက်ခိုက်မှု(နှိပ်ရန်)
ဖွေ့ထိုင်းပါတီက ၀န်ကြီးချုပ်နေရာအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို တနင်္လာနေ့မှာ ကြေညာနိုင်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်အတွက် တာလီဘန်က ပါကစ္စတန်ကို လက်စားချေ တိုက်ခိုက်(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန် DV ကံစမ်းမဲ ရလဒ်မှားယွင်း(နှိပ်ရန်)
စီးပွားရေး နိုဘဲလ်ဆုရှင် မိုဟာမက် ယူနွတ်စ် ရာထူးမှထွက်(နှိပ်ရန်)
ပါကစ္စတန် ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် နှုတ်ထွက်ဖို့ ကမ်းလှမ်း(နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယ ရဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ဆက်ဆံရေး(နှိပ်ရန်)
5/14/2011 10:52:00 AM
Myanmar News Now: 12 May 2011
Questions over Burma's democratic intentions(Click)
Suu Kyi savner forandring i Burma(Click)
EU sanctions exist in name, not effect(Click)
No 'meaningful change' in Burma: Suu Kyi(Click)
Burma images from home andexile(Click)
Burma: UN Envoy Should ‘Not Pay Courtesy Call’(Click)
MYANMAR - Blue ear disease, medically known as Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), has been found infected with pigs in Myanmar's Bago region, local media reported yesterday.(Click)
UN organizations help Myanmar with polio eradication campaign (Click)
Top UN Official Arrives in Burma to Meet with New Government(Click0
Water Shortages Hit Central Burma (Click)
Why Asean chairmanship is important for Burma(Click)
Burma Rocks Asean's Boat (Editorial)(Click)
No 'meaningful change' in Myanmar: Suu Kyi(Click) 8 Myanmar nationals held(Click)
UN official heads to Myanmar for talks with top officials(Click)
UN special envoy visits Myanmar(Click)
5/14/2011 06:06:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (12 မေ 2011)
အစိုးရက ဆန္ဒပြမှုကို တားဆီးဖို့ လူငယ်တွေကို သိမ်းကြုံး ဖမ်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖက် အစီအစဉ်သစ်တွေ ဘင်လာဒင့် မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ တွေ့ရ(နှိပ်ရန်)
လစ်ဗျားမှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြဖို့ ဘန်ကီမွန်း ပန်ကြား(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းက အခြေအနေ(နှိပ်ရန်)
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၂-မေ-၂၀၁၁)
လူထုအခြေပြု အဖွဲ့များ ဖွံ့ဖြိုးရေး NLD ကြိုးပမ်း (နှိပ်ရန်)
ရတနာပုံ အင်တာနက် ၅ နာရီကြာ ရပ်ဆိုင်းမည် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာ့စီးပွားရေး ၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်နိုင်ဟု UNESCAP ခန့်မှန်း (နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံခြားသား တရားမဝင် နေထိုင်မှုရှိ (နှိပ်ရန်)
အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက် (နှိပ်ရန်)
ရော့စ်ဒန်ကလေအမှု တရားလို အမှုရုပ်သိမ်း (နှိပ်ရန်)
အောင်သင်္ခ ၂ မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ ၂၅ သန်းကျော်ထွက် (နှိပ်ရန်)
ထိုင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား မှတ်ပုံတင်ခွင့် ဇွန် ၁၅ ရက်စတင် (နှိပ်ရန်)
အယက်အကန်ကြားမှ ဗေဒါကျောင်း (နှိပ်ရန်)
ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ဓသည်စခန်း ၂ ခု လူစစ်မည် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် များမကြာမှီ လက်မှတ်ရေးထိုးမည်(နှိပ်ရန်)
အပြောင်းအလဲ လုပ်တာကို မကျေနပ်တဲ့ နစက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တပ်မှ ထွက်ပြေး(နှိပ်ရန်)
ကြံဖွံ့ခေါင်းဆောင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဟောင်း မောင်ဦး၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် အောင်မြင်မူနည်း(နှိပ်ရန်)
စစ်တပ်ပိုင် ငါးလှန်းစင်များကြောင့် လူနေရပ်ကွက်များ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်(နှိပ်ရန်)
ဆန္ဒပြ မြန်မာအလုပ်သမားများ တောင်းဆိုချက်အားလုံး ဂျော်ဒန်အလုပ်ရှင် လိုက်လျော(နှိပ်ရန်)
တရားမဝင် မြန်မာ ၉ ဦးကို မလေးရှားရဲဖမ်းဆီး(နှိပ်ရန်)
မြန်မာသင်္ဘောသားတဦး ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် သတိမေ့ သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ထောင်ချခံရမှုကို တစညီပါတီက မူအရ ဆန့်ကျင်(နှိပ်ရန်)
SSA တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး အစိုးရဖက်မှ တပ်ရင်းမှူးကျဆုံး(နှိပ်ရန်)
အင်စီဂျီယူဘီ ဦးမောင်မောင် ကိစ္စ အစီရင်ခံစာတင်(နှိပ်ရန်)
မဲလိမ်တယ် လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ တစည အမတ် ၃ဦး အမှုနိုင်(နှိပ်ရန်)
စာရေးဆရာ နတ်နွယ် ကွယ်လွန်(နှိပ်ရန်)
ကုလ အရာရှိ ခရီးစဉ် ဘယ်လောက် အရေးကြီးလဲ(နှိပ်ရန်)
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် (၃) ရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် ရောက်ရှိ(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးပါတီများ ကုလ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံရန် ပြင်ဆင်(နှိပ်ရန်)
စာရေးဆရာ နတ်နွယ် ကွယ်လွန်(နှိပ်ရန်)
တရားမ၀င် ၀က်ဝံသည်းခြေ ရောင်းချနိုင်ငံစာရင်း မြန်မာပါဝင်(နှိပ်ရန်)
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး: ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် နှင့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ
05/11/2011 ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေး ကိစ္စရပ်သည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ် အပိုင်းများထဲက အစိတ်အပိုင်းတရပ်ဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စကို အကြေအလည် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ဆယ်စုနှစ် ပေါင်း ၆ ခုလောက်အထိ လိပ်ခဲတင်းလင်းဖြစ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးစုရေးရာ ပြသနာများကို ပြေလည်သွားစေနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်ဟာ လွယ်မယောင်နှင့်ခက်သည့်ကိစ္စ၊ တိမ်မယောင်နှင့် နက်သည့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သစ်ထူးလွင်
Xu Caihou -- Vice-chairman of the Central Military Commission
Updated: 2011-05-12 10:57
BEIJING - Vice chairman of China's Central Military Commission Xu Caihou left Beijing Thursday morning to pay an official good-will visit to Myanmar.Xu is making the visit at the invitation of General Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of Myanmar Defence Services.During his stay in Myanmar, Xu is scheduled to meet and exchange views with leaders of the government and the armed forces on international and regional security issues and military ties between the two countries.
5/14/2011 06:03:00 AM